मैले मान्छे मारेको छैन नी ! हँसायो भनेर किन पिर ? : ओली « Rara Pati
३ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनतालाई आफुले हँसायो भनेर पिर नलिन आग्रह गरेका छन् । आफुले मान्छे मारेर वा कसैलाई लुटपाट गरेर नरूवाएको बताउदै उनले नेपाली जनता खुशी भएको देख्ने नचाहनेले यस्तो टिप्पणी गर्ने गरेको बताएका हुन् ।
आफूमाथि ‘हँसाउने कुरा मात्रै गरेको’ भन्ने टिप्पणीतर्फ सङ्केत गर्दै उनले भने, ‘मैले हँसाएँ भनेर किन पीर ? नेपाली जनता खुसी हुँदा, हाँस्दा किन पीर ? रुवाउन खोजेका थियौ, सक्दैनौ, दिइने छैन ।’
नेकपा ओली समूह प्रदेश नम्बर १ को आज काठमाडौंमा उपलब्ध कार्यकर्ताको भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले लामो संघर्षबाट प्राप्त गणतन्त्रलाई कसैको इशारा वा कसैको निजी स्वार्थका लागि प्रतिगमनतर्फ जान नदिइने बताए ।
उनले सुरकारले सुशासन र विकासका प्रयास भइरहेका बेला कोरोना महामारी र सत्तारूढ दलभित्रको विवादले केही प्रतिकूलता सिर्जना गरे पनि यसलाई चिर्दै अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाए ।
केही मान्छेबाट निर्वाचन हुनु देश बर्बादमा जानु हो भन्ने खालको परिभाषा आएको देखेर आफू चकित परेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कुरा चाहिँ लोकतन्त्र गरेपनि जनताको म्याण्डेड लिन डराएर सत्ता कब्जा गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए ।
हँसायो भनेर किन पिर ?